Qaabachiisa Fuulaa Jijjiiruu(Dalgeessa ykn Dhaabbattaa)
Qaabachiisa Fuula Jijjiiruu
Galmeewwan barruu Barreessaatif amaloota fuulaa hunda, fakkeenyaaf kan akka fuula qaabachiisa, haalata fuulatin hiikamu. Durtiidhan, galmee barruu haaraan fuulaawwan hundaaf haalata fuula “Durtii” fayyadama. Yoo barruu galmee jiru bante, haalataaleen fuulaa adda addaa fuuloota adda addaa irratti fayyadamu.
Jijjiiramni amala fula irratti fayyadamte, fuuloota haalata fuula ammee fayyadamu qofa irratti, dhibba akka fidu beekuun baay'ee barbaachisaa dha. Haalataan fuula ammee kabala haalojii keessati gara daangaa jala foddaati tarreefame.
Fuulaawwan hundaaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf
Yoo barruun galmee kee fuula haalatni fuulaa wal fakkaatu qofa qabaate, amaaloota fuulaa sirriin jijjiiruu ni dandeesa:
Caancala Fuulaa cuqaasi.
Dhangii Waraqaa jalatti, “dhaabbattaa” ykn “dalgeessa” fili.
Fuulaawwan muraasaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf
LibreOffice qabachiisa fuuloota galmee keessa jiranii ifteessuuf haalataalee fuulaa fayyadama. haalataaleen fuulaa irra caalaatti amaloota fuulaa qindeessu. Fakkeenyaaf,akka jaalantoo fi irraantoo ykn matadureeti ykn akka fuula moggaati. Haalata fuula “Durtii” galmee ammee jijjiiru, ykn haalata fuula isaa fi haalata fuula kutaalee barruu kanaaf fayyadamte kamiyyu keessaa hiikuu ni dandeessa.
Xumura fuula gargaartuu kanaa irrati,bal'ina haalatawwan fuulaa irrati bal'inaan ni marii'ana. Yoo yad-rimee haalata fuula qabduti hin amanne taate, Mee kutaa dhumaa fuula kana dubbisi.
Haalataalee arfii yookiin keeyyataan adda, haalatni fuulaa sadarkaawu hin beekan. Amaloota haalata fuula jiruu irrati hundaa'udhan haalata fuula haaraa uumuun ni danda'ama, garuu booda yommuu haalataa maddaa jijjiirtu, haalatni fuulaa haaraan battalumatti jijjiirraawwan hin fudhatu.
Fuuloota haalata fuulaa walfakkaatan waliin qaban hundaaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf, jalqaba haalata fuulaa si barbaachisa, sana booda haalaticha fayyadami.
SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.
Haalata fuulaa qabdoo mirgaan yeroo lama cuqaasun Haaraafili. Haalatni fuulaa haaraan jalqaba amaloota isaa hunda haalata fuulaa filame irraa argata.
Caancala fuula Qindeessaa irraa, haalata fuulatif sanduuqa Maqaa keessaa haalata fuulatiif maqaa maxxansi. fakkeenyaaf "My Landscape"
Sanduuqa Haalata haaraa keessatti,haalata fuulaa fuula itti aanuf fayyadamuu barbaaddu kan haalata fuulaa haaraati aanee dhufu fili. Xumura fuula gargaarsaa kana irraati waa'ee kutaalee bal'ina haalatawwan fuulaa ilaali.
Bal'insa haalatawwan fuulaa
Haalata fuulaa LibreOffice keessaa bal'insa isaa beekuu qabda.Fuulaawwan galmee barruu haalata fuulatin gulaalame isaa kamtu dhibame?
Haalootaalee dheerina fuula tokkoo
Haalatni fuula tokko dheeraatu hangii haalata fuula ammee daanga jala irraa hanga qurxiinsa fuula itti aanu irraa eegala. yommuu barruun gara fuula itti aanuti yaa'u qurxiinsa fuula itti aanu ofumaan mul'ata, kunis yeroo tokko tokko "soft page break" jedhama. Karaa gara biraatin, qurxiinsa fuula hujeekaan saaguu ni dandeessa.
Hangii haalata fuulaa hujeekaan qinda'ee
Qixa qubannoo qareetti "page break with style" saaguu nidandeessa. Akka filannoottis, amala "page break with style" keewwaatatti ykn akkaataa keewwataatti fayyadamuu nidandeessa.
Ajajoota armaan gadii keessaa tokko hujjeedhu:
Bakka qubannoo qareetti "page break with style" saaguuf, Saagi - Kutaa Hujeekaa filadhu, sanduuqa tarree irraa maqaa Akkaataa fili, kana booda TOLEE cuqaasi.
Bakka qubannoo qareetti amala "page break with style" keewwata ammaatiif fayyadamuuf, Dhangii - Keewwata - Yaa'a Barruu filadhu. Iddoo kutaawwanii(qurxinsaa) keessatti, Dandeessisi fi Akkaataa Fuulaa Waliin kakaasi. Sanduuqa tarree irraa, maqaa akkaataa fuulaa tokko fili.
Bakka qubannoo qareetti amala "akkaataadhaan xumuura fuulaa" keewwata ammaatiif fayyadamuuf, Keewwata ammaa irraa mirga-cuqaasi. Baafata halqaraa irraa, Edit Paragraph Style filadhu. Caancala Text Flow cuqaasi. Iddoo kutaawwanii keessatti, Dandeessisi fi Akkaataa Fuulaa Waliin kakaasi. Sanduuqa tarree irraa, maqaa akkaataa fuulaa tokko fili.
Title is: Qaabachiisa Fuulaa Jijjiiruu(Dalgeessa ykn Dhaabbattaa)